कुवेतमा काम गर्ने महिलालाई १४ वर्षे आफ्नै मालिकको छोराले तँ मसँग बिहे गर्छेस ? – sagunkhabar.com
रोल्पामा माओवादीले गरेको आक्रमणका क्रममा ज्योतिको ज्यान गएको हल्ला गाउँभरी फैलियो । श्रीमतीको निधन भएको सुनेपछि ज्योतिका श्रीमानले आत्महत्या गरे । ‘त्यतिञ्जेलसम्म बाहिर हिँडे पनि छोराछोरी हेर्ने हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ नै नरहेपछि उनीहरुको हेरचाह गरिदिने पनि कोही भएन ।’ ज्योति भन्नुहुन्छ । श्रीमानको निधन अनि छोराछोरीको भविष्य । यिनै दुई कुराले बाध्य बनायो ज्योतिलाई विदेशिन । २०६२ सालमा गाउँकै कमानसिंह दोङसँग भेट भएपछि दोङले काठमाडौं लगेर हेटौंडाकी माया तामाङलाई जिम्मा लगाईदिनुभयो। उहाँसँगै कुवेत हिँडेकी कमानसिंहकी श्रीमती पनि सँगै थिईन् ।
विदेश हिँडेकी ज्योतिलाई नेपालको एयरपोर्टबाट जान पाइँदैन भन्दै भारतको दिल्ली लगे कुवेत उडाउन । तर ७ दिनसम्म दिल्लीमै राखियो। ‘दिल्लीको बसाई कम कष्टपुर्ण थिएन’ ज्योतिले भन्नुभयो ‘१०–१५ लाई कोचेर एउटै कोठमा राखे अनि पेटभरी खान नदिई महिलालाई जर्बरजस्ती अरु नै धन्दामा लगाउन खोज्दै थिए, तर सकेनन् ।’
भाषा पनि जानेपछि काम चल्दै थियो । एक दिन त्यही घरको १४ वर्षको केटोले ज्योतिसँग भन्यो ‘तँ मसँग बिहे गर्छेस ? बिहे गरिस भने तँलाई नेपालमा घर बनाइदिन्छु ।’केटाको यो भनाई सुनेपछि उहाँको हात थामिएन । उहाँले पहिल्यैको कुरा दोहोर्‍याएर भन्नुभयो ‘खुकुरीले काट्दा बरु सह्य हुन्थ्यो होला तर त्यति बेलाको पीडा त्यो भन्दा पनि असह्य भयो ।’
ज्योति आफूले दुःख पाएर फर्किएपछि अरुलाई सचेत हुन आग्रह गर्नुहुन्छ । भन्नुहुन्छ ‘भाइ बहिनीले नाटकबाट आग्रह गर्दै थिए, म पनि आग्रह गर्छु यदी विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने बुझेर अनि काम सिकेर मात्रै जानुहोस ।
यी हुन् बलिउडमा ठूला घरानाका ज्वाइँहरू